Enweghị ọgwụ na-enweghị enyemaka, M ike na-arụ ọrụ na otu — HunterThinks.com
Enweghị ọgwụ na-enweghị enyemaka, M ike na-arụ ọrụ na otu
M nile ma venlafaxine maka banyere izu atọ. Kwa ụtụtụ, ahụ m jupụtara nchegbu biochemicals ma m na ọ dịghị dopamine, Ya mere, n'agbanyeghị otú ike na m na-agbalị, M ike ịmụrụ anya n'ihi na ihe karịrị otu awa. Nke a catatonic nzaghachi metụtara, ma iche, tonic ịnọrọ.
Mgbe m na-aga ná mpụga, ahụ m n'elu mkpatụ ka ihe niile na-amị ọzọ nchegbu biochemicals. My aru-akwadebe maka ihe ize ndụ ma na-adịghị adịte mkpebi, na ọ na-aghọ sikwuoro m ike ikwu okwu Spanish ma ọ bụ ohere na-okwu na ebe nchekwa. Na-ewute ndị ọzọ na m, nke na-emepụta ihe nchegbu biochemicals, nke na-akpata a na ajọ okirikiri.
Onye ọ bụla nwere ike inyere m aka na ego, ma na 2 April 2019, nna m zitere m ihe email na-agụ, “Ka m nyere gị.” Izu isii tupu mgbe, on 14 February 2019, ọ na-jụrụ maka akwụkwọ ikike iji nyere m aka. Edere m, na akụkụ, “Ị dịghị mgbe mkpa ikike ilebara m afọ asaa nke enweghị ebe obibi.” Ọ bụghị aka m, n'ezie. Ọ nọwo “agbalị” nyere m aka ruo afọ asatọ, ma n'agbanyeghị na na n'elu 2% nke ego earners, ọ na-etịbede nkwa ya. N'agbanyeghị m dịịrị ya US $ 100,000, ọ na-ata m kama na-akwado m na-agbake.
ụnyaahụ, M na-akwụ ụgwọ MXN $ 400 maka gas maka ulo alabeghị m ịgbaziri agbaziri n'ihi na ma ọ bụrụ na a plan-adịghị arụ ọrụ, M na-iberibe. N'ihi na m na-enweghị ego ma ọ bụ aka, m plan malitere ịkọwa ụnyaahụ, otú mmadụ abụọ kwetara inyere m n'ụtụtụ a. Ma nke ha kagbuo na ikpeazụ nkeji. M ka nwere ihe unhealed, miri, na-egbu mgbu ịkpụ na m aka ekpe ma anaghị m ịzụta gbalaga-enyere n'ihi na m na-enweghị ike imeli ha. Enweghị Ebe Obibi na ịda ogbenye na-a agha nke attrition megide ahụ m na akụrụngwa, na m na-adịkwa. Iji malite na-akụziri English klaasị ma na-onwe-zuru ezu ọzọ, M kwesịrị ịgbazite ulo / klas.
Ịgbazite ulo taa, M mkpa ọzọ MXN $ 8200 (US $ 432) ozugbo. Biko akwado nke a ohere pụrụ iche.
Categories Ma hogan anyị, nna m, Ndụ m Tags Abuse, Ma hogan anyị, Death and dying, Enweghị Ebe Obibi, Poverty, Venlafaxine post igodo